Ny mpivarotra velona lalao lasa be mpitia ankehitriny toy izany manome ny tena Casino traikefa ho an'ny mpilalao milalao avy amin'ny fampiononana ao an-tranony amin'ny finday na ny biraonao. NetEnt nanomboka ny velona mpivarotra lalao in 2013. Mampiasa ny teknolojia Webcam mivantana hiaina ny olombelona mpivarotra izay mipetraka ao Studios hamorona tena tany-monina Casino. Live VIP Blackjack manome ny fetra ambony latabatra ho an'ny mpilalao izay tena mahafa-po ho azy koa.
Momba ny Developer ny Live VIP Blackjack
NetEnt naorina tany 1996 iray malaza tany-monina Casino ary efa nanome isan-karazany sy ny rindrambaiko Casino lalao maro samihafa trano filokana aterineto manerana izao tontolo izao. Ny orinasa dia fanta-daza ho an'ny fampandrosoana ambony kalitao lalao izay tonga miaraka amin'ny sary sy ny feo tsara. The VIP Mobile Blackjack Game dia mivantana mpivarotra lalao namorona ny azy ireo.
The VIP Mobile Blackjack Game ny NetEnt manolotra table fetra izay fomba ambony kokoa noho ny ankamaroan 'ny hafa VIP anaram-boninahitra azo avy amin'ny mpandraharaha hafa. Live VIP Blackjack dia tena tsotra sy mivantana ny lalao. Ny vokatry ny lalao dia miankina amin'ny karatra ianao nataonareo tamin'ny ary koa ny fomba tena nahay ianao amin'ny lalao fitsipika. Miaraka amin'ny vintana, mila manana paik'ady sy ny fahaiza-manao ilaina mba hahazoana ny vokatra irina. Ny VIP Mobile Blackjack Game dia nitendry lokanga tamin'ny 8 karatra tapaka miravaka. Misy fito seza misy isaky ny latabatra milalao ity VIP Mobile Blackjack Game. Na izany aza, ny vato fisaka misokatra foana 24/7, mba hahafahanao milalao ity lalao ity isaky ny te-na aiza na aiza sy avy te-. Ny amin'ny chat efajoro omena amin'ny ambony havanana-tanana zorony koa raha tianao ho afaka hiresaka amin'ny mpivarotra sy ny mpiara-mpilalao eo amin'ny latabatra. Teo ambanin'ny amin'ny chat boaty, ho hitanao ny vaovao kisary Tsindrio eo izany mba hanambara ny Bet vola sy ny fifandanjana. Ny lalao mamela anao mamangy ny tena fandraisana izay afaka mifidy ny latabatra tianao hilalao amin'ny. Ny mahazatra safidy ny Stand, Hit, Split sy Double dia misy arakaraka ny karatra ianao nanao.
Ny sasany amin'ireo endri-javatra ny VIP Mobile Blackjack Game dia:
Mahafatifaty fa tsara- voaofana mpivarotra
Live Chat safidy
Mora ampiasaina zavatra manindry mandry mifototra interface tsara
Tena avo RTP
VIP Mobile Blackjack Game manaraka ny fitsipika nentin-drazana blackjack, ka raha efa nilalao alohan'ny blackjack dia tokony ho afaka ny hanaraka izany lalao mora foana.